चामलमा बियाँ होइन, बियाँमा चामल टिप्दैछु (संस्मरण) – Chitwan Post
चामलमा बियाँ होइन, बियाँमा चामल टिप्दैछु (संस्मरण)
निर्दल अस्ताउने र बहुदल उदाउने सङ्गम बेलामा चम्पानगरमा लीलाराज विष्टलाई ल्याउनु साहस, दुस्साहस, स्वाभिमान, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, पतन, उत्थान के थियो ? ३० वर्षपश्चात् पुनः स्मरण र बहस होस् भनेर यो संस्मरण लेखेँ । पुनः स्मरण र बहसप्रति अभिरूचि नहुनेहरुले कम्तीमा पनि रमाइलो त मान्नेछन् । दुईमा एक जुन भए पनि म खुसी हुनेछु ।
हिमालय माविको पुरानो भवनको दोस्रो तलाको छानामा डाडाँभाटा मात्र थिए । सरकारसँग पैसा मागौँ, गहतको झोलमा जात नफालौँ– यी दुईथरीका विचार टकराएर चट्याङ पर्लाजस्तो भइरहन्थ्यो । लीलाराजलाई ल्याऊँ भन्नेलाई लीला नगरौँ भनेर अर्को व्यङ्ग्य कस्थ्यो । विकासको काममा मुख हेर्ने होइन, यौटा भन्थ्यो भने लीलाराजलाई ल्याएर विकासले निकास पाउँछ त ? अर्को ओठे जवाफ लगाउँथ्यो ।
आखिर स्थानीय विकासमन्त्री लीलाराज विष्टले हिमालय माविको थप कोठा उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता पाए । माननीय जेपी भेटवाल मेरो घरसम्म आए र लीलाराज प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा बस्तिनँ भनेर त्यहीँबाट फर्किए । विद्यालयको नाङ्गो छानातिर र्फिर्कएर उनले घोषणा गरे– त्यसलाई छाउनुस् र २५ हजार लिन आउनुस् ।
लीलाराजको बालुवाटारमा मैले नै तारिख बोक्नैपर्ने भयो, किनकि म हिमालयको ‘हेड’ थिएँ । चम्पानगरको लालकिल्लामा मण्डलेले पाइला हाल्यो, अब त्यो बिग्रियो, भनेको भए हामी दिन्थ्यौँ, त्यति जाबो पैसा– कांग्रेसजनहरुको कमेन्ट थियो यो । लीलाराजले पाइला हाल्दैमा उसका पाइला जम्दैनन्, हामी त्यति कमजोर छैनौँ, उनीसँग पैसा लिन सके भयो– यो कम्युनिस्टजनको, विद्यालयको प्रतिवाद थियो ।
पर्खाइको अवसान [कविता]
प्रेमिल रहर [आजको कविता ]
यो कस्तो प्रेम ! (कथा)
म विष्टको घर बालुवाटार जान थालेँ । दुईपल्ट उनलाई भेटेरमात्रै फर्किएँ, अर्को तारिख लिएर । उनी भरतपुर आएको बेलामा पनि भेट्ने तारिख मिल्यो ।
तेस्रोपल्ट बालुवाटार जाँदा उनले भने– ‘तपाईंको छातीको माक्र्सवाद पखालेर फाल्नोस्, म पनि तपाईंजस्तै कम्युनिस्ट थिएँ, उहिले सुकुलमा सुत्थेँ, दालमोठ–चिउरा पानीसँग निल्थेँ, अहिले राज्यको दोस्रो मान्छे छु, उ…त्यो मुख्यमन्त्री निवासमा सर्नमात्र वाँकी छ, माक्र्सवाद धोएपछि पैसा छ ।’
‘म माक्र्सवाद किन धुन्थेँ ? माक्र्सवाद धुनुपर्ने भए लान्नँ, त्यति जाबो पैसा मै दिन्छु’ भनेर म कट्किएँ । उनले मलाई अँगालो मारेर भित्रतिरको कोठामा गोडाहरु जोडेर बसी भने– ‘बहुदल आयो भने म, तपाईंहरु सबैलाई त्यसले स्वाहा पार्छ, अझ मेरो त छाला काढेर नुन–चुक लगाउँछ, सरोज कोइरालालाई मैले मारेको होइन, मारेको भन्ने निधारमा कलङ्कको टीका छ । चितवनमा एउटा राष्ट्रवादी युवा समूह बन्दैछ, त्यसमा तपाईं सामेल हुनुहोस्, बाँकी तपाईंमात्र हो ।’ यस्तो कुरा म किन मान्थेँ ? पत्याउँथे किन ? झोक्किएर हिडेँ । उनी हेरेका हे¥यै भएपछि भने, ‘यस्तो मान्छेले विद्यालय कहाँ बनाउँछ ?’
विद्यालयले मलाई पुनः तारेखमा पठायो । विष्टको घरमा पुगेँ । भने– ‘म तपाईंलाई जुम्लाको जागिरमा पुनः बहाल गराउँछु । पहिला स्विट्जरल्यान्ड गएर आउनुस्, बल्लभ सरहरुको टिम जाँदैछ, तपाईं त्यसको सदस्य, उ…..उहाँहरु पनि आउनुभो कुरा गर्न ।’
म क्रय–विक्रयको माल नभएकोले दोमनमा थिइनँ, तर बल्लभमणि दाहाल, मेरा गुरू त्यहीँ अगाडि आइपुग्नुभएको हुँदा म अक्क न बक्क भएँ । उठेँ र गुरूलाई अभिवादन गरेँ । मलाई नठम्याएर गुरू अल्मलिनुभयो । आफूलाई खोलेँ । मन बोल्यो– ‘आफू बिक्री नहुने गरी स्वर्गको देश जा, दिए पुनर्बहाली ली ।’ विष्ट सबै विषयमा सोच्नुस्, अहिले जानोस्, फेरि आउनुहोस् भन्दै नवागन्तुकहरुलाई लिई भित्रको कोठामा गए ।
तिनीहरु भित्र तासको पञ्चगृहलाई टेको लगाउने र स्विट्जरल्यान्ड जाने कुरा गर्दै होलान् भनी मनमनै कुरा गर्दै म बाहिरिएँ ।
भरतपुर विष्टको घरमा मुक्तराज पन्त, पुण्यप्रताप राणा, केशवराज सापकोटा, इन्द्रलाल श्रेष्ठ, रामप्रसाद घले आदि पञ्चनेताहरुको भीडमा विष्टले मलाई सहजै भने– ‘यी माड्साब माक्र्सवाद पखाल्नोस्, पच्चीस हजार थाप्नोस् भन्दा अन्कनाउँछन् ।’ सीता जमिन भासिएर भित्र खसेपछि उनलाई कस्तो भयो कुन्नि, तर म महेन्द्रपुलबाट खसेर सेतीमा पुगेजस्तो भएँ । उनले मेरो अनुहार पढेर हो कि किन हो, अर्को कोठामा लगेर भने– ‘भीमराज, बालकृष्ण, शशिकिरण, लब्ली सबै आइसके, अब तपाईं आएपछि समूह पूर्ण हुनेछ ।’
प्रथमतः म त्यत्रा मानिसहरुको समूहमा मलाई नहुँदो कुरा भन्ने भनेर आगो भएँ, पानी छर्किएर निभाउने प्रयास गरे उनले । यो समूहको मानिसको नामै तोकेर के भनेका होलान् भनेर छक्क परेँ । ‘पञ्चहरु यस्तै जाल बुनेर पुुतलीहरु फसाउँछन्’ झैँ लाग्यो मनमा । त्यो मोह र प्रलोभनमा फसाउने समय पनि थियो, यस्ता कुराहरु खेले मनमा, त्यो बेला ।
२०६८ मा ‘आत्मदान’ मा विष्टका यिनै कुरा लेख्ता यी ४ भाइमध्येका १ भाइ मसित आगो भएर पानी बारे । अब के–के बार्ने हुन् यसपल्ट । वास्तवमा यो न आगो हुने विषय हो न त बार्ने विषय, किनकि यसका वक्ता विष्ट हुन् म त स्रोतामात्र ।
अर्कोतिर म काठमाडौँ जान परेन । मन्त्रीजीले टोकनाथ न्यौपानेलाई पठाएर पैसा लैजानुहोस् भनेर खबर पठाए । त्यसै गरेँ । टोकनाथ दाइले पैसा ल्याउनुभयो ।
छाना छाइयो । त्यसैले घाम–पानी ओत्दैछ । यतिका तारेख लिँदा र मुद्दा छिनिँदा स्थानीय विकास मन्त्रालय धाउन परेन ।
त्यत्रो हाँकोडाँको र शक्ति–सामथ्र्य भएका लीलाराज आज एक्लै छन् भरतपुरमा । परिवारजन छैनन्, भान्छेमात्र छन् । अल्जाइमरले अँठ्याएको छ । छोराछोरीले हेरेकै छन् ।
यिनको बारेमा कत्तिको लेखिएको छ कुन्नि । जे होस्, अलिकति लेख्ने विचार छ । उनीकहाँ जाने गर्छु । आउँदै गर्नोस् भन्छन् पनि । आउँदै गर्नेमात्र होइन, लेख्छु पनि तपैँको बारे भन्दा हुन्छ भने ।
राजा महेन्द्रले अर्कैलाई बडाहाकिम बनाउन बोलाएका तपाईं अघिसरा भएर गई बडाहाकिम पड्काउनुभएको हो रे नि ? भनेर कुरा कोट्याएर छाडेको छु । अब जाँदै कुरा गर्दै गर्नुपर्ला ।
चामलमा बियाँ होइन, बियाँमा चामल टिप्तैछु ।